बामदेवलाई भाइ नवराज गौतमको चिट्ठी,- फाईदा अरुले लु टे अनि ब,दनाम तपाई हुनुभयो… « गोर्खाली खबर डटकम
आदरणीय दाइ बामदेव गौतम,
गौतम वंशावलीमा तपाईंको नम्बर कति हो थाहा भएन , नम्बर थाहा भए नाता उलट्फेर पनि हुन सक्छ । उमेरले जेठो हुनु भएकोले सामाजिक चलन अनुसार दाइ भनेर सम्बोधन गरेकोहुँ । र ,यो चिट्ठी लेख्तै छु।
दाइ , हामीबीच दुइटा कुरामा समानता रहेछ । एउटा हाम्रो थर अर्को हाम्रो पार्टी एउटै । तपाईं नेकपाको नेता , म भनें समर्थक । यस बाहेक म पुर्वको , तपाई पश्चिमको । तपाईं गृहमन्त्री हुँदा मैले एक दुईपटक भेटेको हो । हाम्रो सम्बन्ध बस् यत्तिमा कायम छ ।
मिडियामा अहिले जताततै तपाईंको चर्चा छ। पार्टी सचिवालयले तपाईंलाई राष्ट्रिय सभामा लाने निर्णय गरेछ । तपाईं पनि जान तयार हुनुहुन्छ रे ! खबर पढेर म अचम्मित भए । तपाईं जस्तो चर्चित नेतालाई के गार्‍हो पार्‍यो कि बाहिर व्यापक बिरोधका बावजुद पनि अहिले तपाई राष्ट्रिय सभामा जान तमतयार हुनुभयो । त्यहाँ तपाईंको भूमिका के ? के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यसबारे अनभिज्ञ रहेकोले चिन्ता लागेको मात्र हो ।
मिडिया मार्फत नै थाहा पाएको हूँ तपाईलाई एकपटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ । तपाईंको इच्छा अस्वभाविक हैन । सँगैका सहकर्मीहरु अझ उमेरमा कान्छा भाइहरु त पटकपटक प्रधानमन्त्री भैसके तपाईहुँदा के को आपत्ति ? तर , कतिपय कानुनवीदहरु भन्दैछन ( प्रतिनिधि सभामा एकपटक जनताले रिजेक्ट गरेका मानिस सोही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन नैतिकताले दिदैन । म भन्छु नैतिकताले रोक्ने भए कुनैबेला हाम्रा एकजना वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री कसरी हुनुभयो ? नैतिकता कुरामा मात्र सिमित रहेछ , राजनीतिमा यसले फरक नपार्ने रहेछ । उता राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने या नमिल्ने बहस चल्दै छ रे । कोही कानुनविद् मिल्छ भन्छ्न कोही मिल्दैन भन्दैछन । म एउटा सामान्य मान्छे , एउटै कानुनका किताब पढेका यी कानुन्चीहरुको फरक फरक कुरा सुनेर म त दङ्ग परेको छु । हैट , यिनीहरुका कुरा सुनेर मलाई डर पनि लाग्यो । यिनीहरुले चोरलाई साधु र साधुलाई चोर पनि बनाउन सक्ने रहेछन ।
अँ फेरि कानुन कै कुरा । हाम्रो गाउँ घर तिर एउटा भनाई निकै चर्चीत छ कानुनका नौ सिङ । कथंकदाचित कानुनका कुनै प्वालबाट छिरेर तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नु भयो भने त्यहाँ तपाई के गर्नुहुन्छ ? कसरी काम गर्नु हुन्छ ? समाज उहीँ हो , दोस्तहरु उही हुन् । छिमेकी पनि उही छ । गार्‍हो पर्दैन ? म त प्रधानमन्त्री ओलीलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर काममा भाँजो हालेको झलझल्ती देखिरहेको छु । उहाँ त जब्बर भएर नै अहिलेसम्म टिक्न सकेको हो । भोलि तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु भयो भने कसरी टिक्ने ? आजैदेखि सोच्नुहोस है ! तपाई प्रधानमन्त्री भए म त खुशी नै हुन्छु । नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै गौतम प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । तपाई भए त गौतम बंशकै नाम इतिहासमा लेखिन्थ्यो , कत्रो गर्वको कुरा ।
तपाईं खराब ब्यक्ती हो भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन । अँ एउटा कुरा तपाईंको विगत र वर्तमान हेर्दा तपाई छिटै फुरुक्क पर्ने , लहैलहैमा उल्किने चाहिँ पक्कै हो । विगतमा कसैको उक्साहटमा तपाईंले गर्न नहुने कतिपय कामहरु पनि गरेकै हो । फाईदा अरुले लुटे अनि बदनाम तपाई हुनुभयो । यी सब सम्झेर मेरो मनमा कताकता चिसो पसेको छ । यसपटक पनि कुनै दोस्तहरुले उचाले कि ? कम्युनिस्टहरुमा कुनै बेला सफाया भन्ने शब्द निकै चर्चित थियो । कहिँ उचाल्नेहरुको स्वार्थ पूरा भएपछि तपाईंको राजनीतिक भविस्यको पनि सफाया गर्छन कि ? डर लागिरहेछ । तपाई त पुरानो कम्युनिस्ट , सबै अनुभव गरेकै कुरा हो । अलि चनाखो भएर सोच्नुस है ।
एउटा कुरा भन्न झन्नै बिर्सेको । हिजो अस्ति रिलिज भएको तपाईको नयाँ देशभक्ति गीत आजै हामी सपरिवारसँगै बसेर टीभीमा हेर्‍यौं , जनभावना बोकेको गीत रहेछ । शब्द संयोजन र संगीत मिठो छ । दाइलाई धेरै धेरै बधाई । राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ । साँच्ची भन्दै छु दाइ , तपाईको ठाउँमा म भएको भए , प्रधानमन्त्री सरधानमन्त्रीभन्दा गीत लेखन पट्टि ध्यान दिन्थे । राजनीतिमा छलछाम धेरै । पहिलाझैं कार्यकर्ताहरु पनि छैनन् । पहिलाका सोझा हुन्थे , भेंडोझैं एकोहोरो काममा लागिरहन्थे । अहिलेका त बिजुली छन बिजुली । अलिकता दुख भयो कि मलाई खै ? भनेर पाखुरा सुरकिन्छ्न । सांगीतिक क्षेत्र धेरै स्वच्छ । टेन्सन पनि धेरै लिनु नपर्ने । राम्रो गीत लेख्यो भने कालान्तर सम्म सम्झीरहने । इज्जत पनि पाइने । नेपालमा कति प्रधानमन्त्री आए , गए । एकादुई बाहेक कसैको सम्झना आउँदैन । यदि तपाईले दुईचार ओटा राम्रो गीत लेख्नुभयो भने मान्छेले बर्षौंसम्म सम्झी रहन्छ्न । म त भन्छु दुईचार महिना मन्त्रालयको भित्तोमा फोटो झुन्ड्याउन मात्र किन बन्नु प्रधानमन्त्री ? कुनैबेला महेन्द्र पनि राजा भएकै हुन् । महेन्द्रलाई राजाको रुपमा मानिसहरु नसम्झेलान तर गीतकार म.बी.बी.शाहको रुपमा पछिसम्म सम्झी रहने छन । उहाँका गीतहरु …गर्छिन पुकार आमा , के छ र दिउँ , गाजलु ती ठूला ठूला आँखा ..कसैले बिर्सन सक्तैन । त्यस्तै कवि तथा गीतकार इश्वर बल्लभलाई उहाँका……दुईटा फूल देउरालीमा , मेरो बेहोसी आज …जस्ता गीत र कविताले अमर बनाएको छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ ( समझदार के लिए इसारा काफी । आगे दाइको मर्जी ।
गन्थन धेरै लेख्यो भनेर बोर नमान्नु होला । अब सकियो । काठमाडौंमा कोरोना निकै फैलिएको सुन्दै छु ,पाको उमेरकालाई निकै सताउँछ रे । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला । धन्यवाद । लभ यु ब्रो । भाइ नवराज गौतम